Waxaad bilaabi kartaa ammaan credit card. horumarka Stiltkaararka deynta ayaa la hubaa inay waddanka u soo guurey iyo dadka kale ee ay u halgamayaan in la dhiso credit. The kaararka deynta xaqiijisatay aan run ahaantii credit maxaa yeelay, waxaad lacagta isaga siin karaan mar hore, ama u yaboohday qof in aad bixiso. Laakiin waxaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhisaan isku dheelitirnaan wacan. Bangiyada iyo shirkadaha credit card ayaa helay kaararka deynta sidoo kale. Stilt leeyahay dulsaarka hoose iyo ka fudud si aad u dalbato ka badan qiimaha kale ee shirkadaha. Sidaas samayn ururada shaqaalaha credit.
ururada Credit waa sida bangiyada, laakiin waxaa ay isku dayayaan in ay caawiyaan dadka si ay u guulaystaan. The milkiilayaasha dhammaan xisaabaadka wada leeyihiin credit union ah. Waxay ka caawisaa ururrada credit by lacagaha deenta ama bixinta kaararka deynta dadka dakhligoodu yar yahay iyo dadka aan heysan taariikhda credit. Waxay kaa caawin doona inaad aad u badbaadiyo lacag. Raadi credit union kuu dhow
Amaahda waa deyn in dadka ka iibsan kartaa guri. Waxaa kor u weyn oo bil kasta. Laakiin mararka qaarkood aan ka badnayn kirada bixiso waa, iyo in dhamaadka, aad leedahay doonaa gurigaaga! Waxay noqon kartaa adag si aad u hesho amaahda. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad credit union ayaa kaa caawin. اقرأ عن الرهون العقارية لغير المواطنين. إدارة الإسكان الاتحادية تعلمك عن القروض المختلفة ويمكن أن تعلمك كيفية توفير المال على منزلك الجديد.
Hay'adaha Maaliyadda ee Horumarinta Bulshada (CDFIs) La mid ah ururada shaqaalaha credit. Ma doonayaan in faa'ido laga helo adeegyada ay. Halkii, ay doonayaan in ay dadka ka caawiyaan inay ku guuleystaan. Hay'adaha amaah hore wax amaahisaan lacag si ay ganacsi yar yar, ganacsiga cusub, oo guryo bay dhisan qiimaha ku haboon Raadi CDFI kuu dhow